Breaking:Kalay mipi ralkap nih minung’minung tamtuk an tlei hoi hna e. – Lai Lungrawn Post
Nimin zinga sipaiin Kalaymyo Civil Army, KCA inkulhna Tahan hmunabeih thutah khan mipui sipai KCA mi 18 man an nih thu hriatani.Sipaiin Tahana KCA inkulhna hmunabeihnaah hian laipui, laite chi hrang hrangahmangani.Man tawk KCA- Kalay Civil Army man an nih rual hian, 12 bore silai mu hman theih siam chawp silai 4, tualchher silai 11, gas silai 12, ulhbun 4, siam chawp bomb 5, siam chawp chil puah bomb 8, 12 bore silai mu 41, mei-um (မီးပုလင်း) 8, ware hrui kual 8, batary 1, thir awmphaw4man telani bawk.Lalpa, kan ramin zalenna, remna leh muannaahmuh leh theihna turin i mite țawngțaina ngaihthlaksak ang che.
အကြမ်းဖက်သမား မအလစစ်တပ်က ကလေး ခံတပ်ဖြိုခွဲစဉ် ပြည်သူ ၁၈ ဦးဖမ်းဆီး အကြမ်းဖက်သမား မအလစစ်တပ်က ကလေးမြို့ တာဟန်းခံတပ်ဖြိုခွဲစဉ် KCAအဖွဲ့ဝင် ပြည်သူ ၁၈ ဦးဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်။တာဟန်းခံတပ်ကို တပ်မ ၉၉ က တိုက်ပွဲပုံစံနဲ့ လက်နက်ကြီး လက်နက်ငယ်မျိုးစုံအသုံးပြုကာ ပစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရတဲ့ KCA- Kalay Civil Army အဖွဲ့နဲ့အတူ 12 bore ကျည်ဖြင့် ပစ်ခတ်ရသော လုပ်သေနတ် ၄ လက်၊ လက်လုပ်သေနတ် ၁၁ လက်၊ ဂတ်စ်သေနတ် ၁၂ လက်၊ တူမီးသေနတ် ၄ လက်၊ လက်လုပ်ဗုံး ၅ လုံး၊ လက်လုပ်မိုင်း ၈ လုံး၊ 12 bore ကျည် ၄၁ တောင့်၊ မီးပုလင်း ၈ လုံး၊ ဝါယာကြိုး ၈ ခွေ၊ ဘထ္ထရီ ၁ လုံး၊ သတ္ထုဒိုင်း ၄ ခု သိမ်းထားတယ်
Thawngdang:KIA thiltih lawng hi uar takin nan chim theu le, hakha le falam lei CNA/F lam nan dai ziar ko hih, nan umnak leiah ralkap an um ve lo maw si? Nan thawmpang zei hman theih awk thaaum lo, nan hna tuan ding chu chhim hau loin nan thei ko lai tih hi ka ruahnakasi. cu ruangah chin mi phun pawl myanmar kan zalen khawh nak dingin, kan umnak cio ah kan tanrual hiathupi bik mi cuasi ko Pu ding a.